Kitra atsy La Réunion : niala tao amin’ny Ste Marienne i Gladyson | NewsMada
Par Taratra sur 20/07/2020
Tsy nanavao ny fifanarahany amin’ilay mpilalao baolina kitra malagasy, i Henri Charles Gladyson, intsony ny ekipan’ny Ste Marienne, atsy La Réu­nion. Na teo aza izany, tsy niandry ela fa vetivety ihany i Gladyson dia efa nahita klioba hilalao­vana indray ho an’ny taom-pilalaovana 2021. Nifindra ao amin’ny AS Ste Suzanne in­dray izy. Somary nahagaga ny rehetra ihany ity safidiny ity satria ekipa milalao any amin’ ny rezionaly 2 ny AS Ste Su­zanne. «Faniriako mihitsy ny hilalao ao amin’ny rezionaly 1, saingy tsy te hijanona ela amin’ny tsy filalaovana aho. Niantso ahy ny Ste Suzanne ary nanankina ny fitokisany amiko ka nekeko. Tsy fahafaham-baraka ihany koa ny milalao any amin’ny Rrzionaly 2”, hoy i Gladyson, izay efa 31 taona, ankehitriny.
Nomarihiny fa hiezaka ha-nome ny heriny izy ao anatin’ ity dimy volana ity hahatraran’ ny ekipa ny tanjony, Fanamby goavana ho azy izany. Tsiahi­vina fa anisan’ireo mpilalao telo voalohany nahatafiditra baolina be indrindra, tatsy La Réunion, i Gladyson, namono baolina miisa 15.
Miandrandra fatratra an’i Gladyson ireo mpomba ny Ste Suzanne, ary manantena fa hitondra ainga vao ho an’ny ekipa ao amin’ny rezionaly 2 ka mihevitra fa mety ho tonga hatrany amin’ny fiadiana ny amboaran’i Frantsa mihitsy.